हिउँ किन सेतो हुन्छ ?- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
माघ १२, २०७६ गोविन्द पोखरेल
जाडो सुरु हुनेबित्तिकै पहाड तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ । हिउँ परेको क्षेत्रमा हिउँ खेल्न धेरैलाई मन पर्छ होला । कतिपयले हिउँले ढाकेको सेताम्मे पहाडहरू देखेका होलाऊ । हिउँको विषय आउँदा कहिले काहीँ यो कसरी बन्छ ? जाडोमा मात्रै किन हिमपात हुन्छ ? अनि हिउँ किन सेतो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि लाग्दो हो ।
आज हामी हिउँ, हिमकण, हिमपात र हिउँको रंगका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ । हिउँ बुझ्नुभन्दा पहिला पृथ्वीको वायुमण्डलका बारेमा बुझ्नु जरुरी छ ।
वायुमण्डल हावाले भरिएको भाग हो । कतिपयले आफ्नो विज्ञान किताबमा वाष्पीकरण (इभापोरेसन) का बारेमा पढेका पनि होलाऊ । पृथ्वीको सतहमा भएको पानी तातेपछि बाफ बन्ने र वायुमण्डलमा पुग्ने प्रक्रियालाई वाष्पीकरण भनिन्छ । बाफ बनेको पानी वायुमण्डलमा पुगेपछि सेलाउन थाल्छ । बाफ सेलाएपछि पानी बन्छ । अनि वर्षा हुन्छ । यो प्रक्रियालाई चलचक्र (वाटर साइकल) भनिन्छ ।
हिउँ, हिमपात र हिमकण पनि यही जलचक्रसँग सम्बन्धित छन् । तर, यसमा तापक्रमको कुरा आउँछ । भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ ? पानी सय डिग्रीमा उम्लने र शून्य डिग्रीमा जम्ने गर्छ नि ।
पृथ्वीको सतह तातेर बाफ बनेको पानीका कण वायुमण्डलमा पुग्छन् । वायुमण्डलमा स–साना कणहरू पनि हुन्छन् । यी धुलोलगायत पराग कणहरू हुन् । पानीको बाफ यी कणमा मिसिएपछि सेलाउन थाल्छन् । तापक्रम धेरै कम भएमा बाफ सिधै बरफमा परिवर्तन हुन्छ । अनि यी कणसँग टाँसिन्छ । यसरी हिमकणहरू बन्छन् । बाफ पानी नबनी सिधै बरफ बनेको अवस्थामा हिमकण निर्माण हुने हो ।
हिमकण (स्नो फ्लेक्स) हरू विभिन्न आकारका हुन्छन् । प्रायः यिनीहरू षट्कोण (हेक्जागोनल) आकारका हुन्छन् । पानीमा भएको हाइड्रोजन र अक्सिजनबीचको बोन्डका कारण यी स्नोफ्लेकहरू षट्कोण आकारका बन्ने गरेका हुन् । यिनीहरू स–साना हुन्छन् । हातले छुनेबित्तिकै बिलाएर जान्छन् । हिमकण नै हिउँको एक भाग हो । जब हिमकणहरू ठूलो मात्रामा संकलित हुँदै जान्छ, त्यो नै हिउँ हो ।
कहिलेकाहीँ सतहको तापक्रम अत्यन्त कम हुँदा पानी जमेर बरफ बन्छन् । यो विशेष गरेर उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने गर्छ ।
डल्ला कसरी बन्छ ?
हिउँ परेका क्षेत्रमा डुल्न र घुम्न जाँदा हामी कहिलेकाहीँ हिउँको डल्लो बनाउँछौं । हिउँको सजिलै डल्ला बन्नुमा पनि विज्ञान लुकेको छ । हिमकणहरूमा केही भाग खाली हुन्छ । खाली ठाउँमा चिसो हावा भरिएको हुन्छ । जब चाप दिन्छौँ हिउँ अझ चिसो भइदिन्छ, जसका कारण सजिलै डल्लो बन्छ । हिमकणलाई पानीले अझ टँसाइदिन्छ । हिमकणहरू चाप र तापका कारण पग्लिरहेको पनि हुन्छ । हिउँ पग्लेर पानी बन्छ । र, हिमकण पानीका कारण टाँसिन्छ अनि डल्ला बन्छ । डल्लाका अलवा आफूले चाहेअनुसार आकार बनाउन पनि सकिन्छ ।
हिउँमा खेलिने खेलजस्तो कि स्किङ पनि यही कारणले सम्भव भएको हो । नत्र हिउँमा केही पानी नहुँदो हो त घर्षणले गर्दा खेलहरू खेल्न सम्भव नै हुने थिएन ।
हिउँ किन सेतो ?
वास्तवमा हामी प्रकाशलाई प्रतिविम्बित (रिफ्लेक्ट) गर्ने वस्तु मात्र देख्न सक्छौँ । हावालाई हामी देख्देनौँ किनभने हावाले प्रकाशलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन । भाइबहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको, रंगको हो । कुनै वस्तुले प्रकाशमा हुने रंग (इन्द्रेणीमा हुने ७ रंग) आफूमा सोसेर जुन रंगलाई प्रतिविम्बित गर्छ, वस्तुको रंग पनि त्यहीँ हुने हो । जस्तो कि पहेंलो कपडा पहेंलो देखिन्छ किनभने उक्त वस्तुले प्रकाशमा भएका ७ वटा रंगमध्ये पहेंलो रंगलाई मात्र प्रतिविम्बित गर्छ र बाँकी रंगलाई आफैँसँग सोसेर (एर्ब्जभ) राख्छ । कुनै वस्तुले प्रकाशमा भएका सबै ७ वटै रंग आफैंमा सोसेर कुनै रंग प्रतिविम्बित गर्दैन भने, त्यो वस्तु कालो देखिन्छ । हिउँमा भएका कणहरूले प्रकाशमा भएका सबै रंगलाई बराबर रूपमा प्रतिविम्बित गर्छ, त्यही भएर सेतो हुन्छ । सबै
रंगलाई बराबररूपमा मिलाउने हो भने त्यो रंग सेतो बन्छ ।
हिउँ जाडो महिनामै किन ?
उच्च हिमाली क्षेत्रमा सधैं हिउँ पर्छ । तर जाडोयाममा पहाडी क्षेत्र पनि हिउँले ढाकेर सेताम्मे देखिन्छन् । यो समयमा वातावरणको तापक्रम ‘फ्रिजिङ’ स्तरमा पुग्छ । जमेको पानी पग्लन पाउँदैन अनि हिउँ धेरै हुन्छ । हिमकणहरू धेरै बन्दै र थुपि्रँदै गएपछि हिउँ पनि धेरै हुन्छ ।
हाम्रो शरीरले धेरै तातो र धेरै चिसो थेग्न सक्दैन । शरीरको तापक्रम स्थिर हुनुपर्छ । धेरै हिउँ खेल्दा शरीरमा असर गर्छ । शरीरका तन्तु तथा कोषहरू मर्छन्, जसले चिसोमा लाग्ने खालका रोगको जोखिम बढाउँछ । कतिपयलाई हाइपोथर्मिया पनि हुन सक्छ । जब शरीरको तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुन्छ, हाइपोथर्मियाको सम्भावना हुन्छ ।
थकान हुने, शरीरबाट छिटो–छिटो ताप (ऊर्जा) सकिनेलगायत मुटुसम्बन्धी रोगहरू पनि लाग्न सक्छन् । हिउँले शरीरलाई धेरै चिसो बनाउँछ । औसत तापक्रममा काम गर्ने शरीरका अंगलाई ऊर्जा आवश्यक पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा अंगहरूले काम गर्न छाड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । रोग संक्रमणको भय हुन्छ । त्यही भएर हिउँ खेल्न जाँदा, चिसोमा हिँड्दा बाक्लो लुगा लगाउनुपर्छ । हिउँको डल्ला बनाउँदा वा खेल्दा पन्जा लगाउनुपर्छ । हिउँ पर्ने क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्नु हुँदैन । फोहोरमा हिउँ थुप्रिँदा लामो समयसम्म त्यहीं रहन्छ, जसका कारण रोग फैलन्छन् । यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७६ १०:३१
फेरि अर्को अचम्म १ अरू बेला तँछाडमछाड गर्दै गाडीहरू गुड्थे सडकमा । तर आज एउटा पनि गुडेका थिएनन् । सडक खाली थियो । अरू बेला छेउछेउबाट हिँड्थे मान्छेहरू । आज सडक बीचबाटै हिँडिरहेका थिए । राजु, विद्या र साकार पनि रमिता हेर्दै सडकको बीचबाटै हिँड्न थाले ।
‘आहा १ सडकको बीचबाट हिँड्दा त क्या मज्जा १’ विद्याले रमाउँदै भनिन् । अरू बेला डराइडराई सडकको पेटीबाट हिँड्नुपर्थ्यो । खाली सडकको बीचबाट हिँड्दा उनीहरूलाई मजा आयो । राजुले खुसी हुँदै भने, ‘सधैं यस्तैगरी हिँड्न पाए झन् कति मज्जा हुन्थ्यो ।’
‘त्यही त, गाडीले किच्ला भन्ने डर छैन । मोटरसाइकलले ठक्कर देला भन्ने डर पनि छैन,’ साकारले सानो ढुंगालाई खुट्टाले हान्दै भने । अलि पर मान्छेको हूल देखेर राजुले भने, ‘आज किन गाडी नचलेको होला हगि ?’ विद्याले परबाट आउँदै गरेको मान्छेलाई देखाउँदै भनिन्, ‘उहाँसित सोधौं न ।’
राजुले त्यो मान्छेको अगाडि गएर सोधे, ‘अंकल, आज किन गाडीहरू नचलेको ?’
‘किनकि आज सहरमा आन्दोलन छ,’ यसो भन्दै त्यो मान्छे जान खोज्यो । के होला आन्दोलन भनेको ? विद्याले बुझिनन् । उनले सोधिन्, ‘अंकल, किन आन्दोलन गरेको ?’
‘महँगीको विरोधमा’ हतार भएकाले हो कि, यति भन्दै त्यो मान्छे फटाफट बाटो लाग्यो । बेलाबेलामा घरमा पनि बुबाआमाबीच यस्तै महँगीको बारेमा कुरा चल्थ्यो । तर आज केको महँगीको विरोधमा आन्दोलन भएको हो, त्यो भने उनीहरूले बुझ्न सकेनन् । अलि पर पुगेर राजुले अर्को एकजना मान्छेसित सोधे, ‘अंकल, आज केको आन्दोलन हो ?’
‘सरकारले डिजेल र पेट्रोलको भाउ बढायो, त्यसैले,’ त्यो मान्छेले भन्यो । ‘आन्दोलन गरेपछि भाउ घट्छ त अंकल ?’ यसपटक विद्याले सोधिन् । ‘घट्न सक्छ,’ त्यो मान्छेले हिँड्दाहिँड्दै भन्यो । ‘अनि सडकमा आगोचाहिँ किन बालेको नि अंकल ?’ अलि पर कालो मुस्लो धुवाँ आउने गरी आगो बालेकोतिर देखाउँदै साकारले सोधे ।
‘अचेल आन्दोलन गर्ने भनेकै आगो बालेर त हो नि बाबु,’ हाँसेर यसो भन्दै त्यो मान्छे आफ्नो बाटो लाग्यो । उनीहरू त्यहाँबाट पनि अगाडि बढे । त्यसै बेला उनीहरूले ज्योति मिसलाई आफूहरूतिर आउँदै गरेको देखे । ज्योति मिसले पनि उनीहरूलाई देख्नुभयो । उनीहरू स्कुलतिर जाँदै गरेको देखेर भन्नुभयो, ‘आज स्कुल बन्द छ, तिमीहरू घर फर्क ।’
‘आन्दोलन हुँदा स्कुल पनि बन्द गर्नुपर्ने होला,’ राजुले मनमनै सोचे । ज्योति मिसको कुरा मानेर उनीहरू घर फर्के ।
उनीहरूको घर जाने चोकमा पनि मान्छेले आगो बालेका थिए । त्यो देखेर विद्याले एकजना मान्छेसित सोधिन्, ‘अंकल, यहाँचाहिँ आगो किन बालेको ?’
‘त्यहाँ महँगी घटाउन आन्दोलन भइरहेछ, यहाँचाहिँ जाडो घटाउन आन्दोलन गरेको,’ त्यो मान्छेले अलिकति ठट्टा गर्दै भन्यो ।
चिसोले गर्दा मान्छेहरू त्यही बलेको आगो तापिरहेका थिए । अलिअलि जाडो त राजु, विद्या र साकारलाई पनि लागिरहेको थियो । त्यसैले उनीहरूलाई त्यहाँ गएर आगो ताप्न मन लाग्यो । तर भीडमा जान मन लागेन । उनीहरू घरतिरै लागे ।
राजु, विद्या र साकारलाई पनि आगो बाल्न मन लाग्यो । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै उनीहरूले पनि सल्लाह गरे– ‘हामी पनि भोलि आगो बालेर जाडोविरुद्ध आन्दोलन गरौं ।’ अबचाहिँ उनीहरूले आन्दोलनको अर्थ बुझेजस्तो भयो ।
आगो बालेर आन्दोलन गरेपछि महँगी घट्छ भने जाडो पनि घट्छ होला । अनि कुइरो पनि भाग्छ होला । उनीहरूले सल्लाह गरे ।
राजु अरू बेला सधैं आमाले उठाएपछि मात्रै उठ्थे । त्यो दिन आफैं सबेरै उठे । उनी बाहिर जान खोजे । त्यही बेलामा भान्साबाटै आमा कराउनुभयो, ‘चिसो लाग्छ, बाहिर नजाऊ बाबु ।’
बाहिर साँच्चै चिसो थियो । कुइरो पनि डम्म लागेको थियो । राजुले हिजोको आन्दोलन सम्झिए । मान्छेहरूले सडकमा आगो बालेको पनि सम्झिए । उनले आमालाई बोलाएर भने, ‘आमा, हामी पनि आन्दोलन गरौं न ।’
उनको कुरा सुनेर आमाले डराउँदै भन्नुभयो, ‘के भनेको बाबु यस्तो ?’ आमा डरले अत्तालिएको देखेर राजुले हाँस्दै भने, ‘हाम्रो आँगनमा आगो बालौं भनेको क्या !’
‘किन बाल्ने आगो ?’ आमाले फेरि अनौठो मानेर सोध्नुभयो ।
‘कुइरो हटाउन अनि जाडो घटाउन’ राजुले कुइरोतिर देखाउँदै भने । ‘कसले भनेको आगो बालेपछि जाडो घट्छ भनेर ?’ आमाले अचम्म मान्दै सोध्नुभयो । ‘हिजो सडकमा आगो बालिरहेका थिए । आगो बालेपछि महँगी घट्छ रेन्त । आगो बालेपछि जाडो पनि घट्छ होला,’ राजुले आमाको मुख हेर्दै भने ।
आमा मुसुमुसु हाँस्नुभयो । बल्ल आमाले कुरा बुझ्नुभयो । त्यसपछि उहाँले एक आगालो दाउरा ल्याएर आँगनमा राखिदिनुभयो । सलाई कोरेर आगो पनि बालिदिनुभयो । आगो दन्दनी बल्न थाल्यो । आमाछोरा दुवै आगो ताप्न थाले ।
राजुको घरको आँगनमा दन्दनी आगो बालेको देखेर छिमेकी घरका गोपीदाइले सोध्नुभयो, ‘आज किन यसरी आगो बालेको माइली दिदी ?’ राजुले हत्तपत्त भने, ‘आन्दोलन गरेको ।’
‘कस्तो आन्दोलन ?’ गोपीदाइले आश्चर्य मानेर सोध्नुभयो ।
‘जाडो घटाउने आन्दोलन’ राजुले हाँस्दै भने ।
राजुको कुरा सुनेर गोपीदाइले बुझेझैं हाँस्दै भन्नुभयो, ‘एऽऽऽ त्यसो पो १ त्यसो भए म पनि अलिकति दाउरा थपिदिन्छु ।’ यसो भन्दै उहाँले पनि एक अँगालो दाउरा ल्याउनुभयो ।
राजुको घरमा आगो बालेको देखेर विद्या, साकार र अरू केटाकेटी पनि आए । सबै मिलेर आगो तापे । राजुले कुइरोतिर हेरेर भने, ‘भाग् कुइरो भाग् । नत्र तँलाई आगोले पोल्ला ।’
राजुले भाग् कुइरो भाग् भनेको सुनेर विद्याले आमाले भन्ने गरेको कुरा सम्झिइन् । हिउँदका बेला केटाकेटीलाई जाडो हुन्थ्यो । त्यसैले कहिलेकाहीँ आमाले अलि ठूलो स्वरमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘दगुर् कुइरो दगुर् । तेरो घरमा चोर पस्यो । सातु–सामल बुकायो । मानु–पिठो लुकायो । बूढो भैंसी लडायो । थोत्रो नाङ्लो ठटायो ।’
विद्याले चाहिँ आफ्नै मनले सोचेर भनिन्, ‘दगुर् कुइरो दगुर् । तेरो घरमा चोर पस्यो । दुई माना पिठो चोर्‍यो । तेरो छोरो भोकै पर्‍यो । भोकले उसलाई गर्नु गर्‍यो । दौडिँदै भित्र–बाहिर गर्‍यो । दौडिँदै गर्दा कट्टु झर्‍यो । कट्टु नलाई जिल्ल पर्‍यो । छिटोछिटो दगुर् कुइरो दगुर्... ।’ त्यसपछि राजु, विद्या, साकार र अरू केटाकेटी पनि उसैगरी कराउन थाले, ‘दगुर् कुइरो दगुर्... ।’
एकछिनपछि विस्तारै कुइरो हट्दै गयो ।
कुइरो हटेपछि न्यानो घाम लाग्यो । केटाकेटीहरू खुसीले उफ्रिन थाले ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७६ १२:०५